Amerika Latina · Avrily, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Avrily, 2013
Febroary 2022 1 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Avrily, 2013
Mampanahy ny Hoavin'ny Trano Famakiam-Pokonolona Ao Porto Rikô
Karaiba 30 Avrily 2013
Miavaka ny Trano Famakiam-bokim-pokonolona San Juan, ao Porto Riko. Tsy mba manana kolontsaina momba ny trano famakiam-boky ho an'ny daholobe sy ny vondrom-piarahamonina ity nosy ity, satria natokana ho an'ireo mpikambana amin'ny toerana tahaka ny oniversite ny ankamaroan'ny trano famakiam-boky. Amin'ireo trano famakiam-boky misokatra ho an'ny daholobe, vitsy ireo azon'ny mpamaky boky...
Lasa Nifanandrina ny Football sy ny Labiera ao Panama
Panamà 29 Avrily 2013
Football sy labiera, zava-droa tian'ny Panameana indrindra, no lasa nifandona rehefa nalain'ny orinasa mpamokatra labiera Baru-Panamá [es] ny kaonty bankin'ny Federasiona Panameana Football (FEPAFUT), itakiany onitra $7 tapitrisa dolara amerikana noho ny fanapahana fifanarahana. Nitatitra toy izao i Cocoas [es] tamin'ny 25 Avrily 2013: No malas, son terribles noticias para la Federación Panameña de Fútbol que hoy tiró...
Niakatra Ny Tahan'ny Famonoana Vehivavy Ao Meksika
Meksika 29 Avrily 2013
Violeta, tovovavy mpianatra 18 taona no hita faty [es] tao amin'ny làlan-tany ao amin'ny Faritra Chiapas, nahitana dian-dratra ny vatany. Nandritra izany ihany, tao amin'ny Faritra Guanajuato, fatim-behivavy iray antsoina hoe Olga no hita [es] nalevina ny tapan'ny vatany ary rakotra sokay. Toa nokendaina izy. Roa amin'ireo lasibatra manoloana ny fihanaky ny herisetra arahina...
Lahatsary: Ny Herisetra Sy Ny Fiarovana Ireo Mpanao Gazety Ao Meksika
Meksika 26 Avrily 2013
Amin'ny teny espaniola avokoa ny rohy rehetra raha tsy misy ny fiovana. Anisan'ny vaovao mbola malaza ny lohahevitra momba ny herisetra ao Meksika. Tamin'ny taona 2011, nikarakara Fetiben'ny Bilaogy ny Global Voices amin'ny teny espaniola izay maro tamin'ireo bilaogera Meksikana no nandray anjara (jereo ny lahatsoratra nadika tamin'ny teny malagasy 1, 2, 3 [fr], 4 [fr] ary 5). Nandritra...
Venezoela: Fanombohan'ny Fifamelàna ve?
Venezoela 25 Avrily 2013
Ao anatin'ny fisavoritahana [en] sy fifandonana [en] izay nametraka fenitra teny an-dalambe sy any anaty aterineto taorian'ny fifidianana [en] ny 14 aprily, sehatry iray ho an'ny fisaintsainana maro ihany koa ireo fampahalalam-baovaon'olon-tsotra.
#FreeRod (Fanafahana An'i Rodrigo): Fandresena Mialoha Tamin'ilay Raharaha Fakàn-Tahaka Maneso Tamin'ny Twitter
Shily 25 Avrily 2013
Nitatitra momba ilay mpisera Twitter Shiliana Rodrigo Ferrari, izay manana raharaham-pitsarana noho ny fampiasana kaonty Twitter maka-tahaka maneso ilay milionera Andrónico Luksic ny Global Voices Advocacy tamin'ny volana Marsa. Manam-baovao tsara momba izany raharaha izany izahay: nolavin'ny Fitsarana ao Santiago, renivohi-pirenena ny fitoriana natao azy, mbola tsy fanapahan-kevitra farany anefa izany ka mety...
Venezoela: Miteraka Herisetra Ny Ahiahy Taorian'ny Fifidianana Sy Ny Tsy Fahatokisana
Venezoela 23 Avrily 2013
Mitohy ety anaty aterineto sy eny an-dalambe ny fanehoankevitra mivaivay mikasika izay ho vokatry ny fifidianana ao Venezoela, natao tamin'ny 14 Aprily. Feno hafatra an-katezerana sy fifampiangàna avy amin'ny andaniny sy ny ankilany ireo tambajotra sosialy, izay mahatonga fisarahana eo amin'ireo mpomba ny foto-kevitra Chavez sy ireo mpiara-dia amin'ny mpanohitra ny governemanta.
Chile : Velona Indray Ny Hetsiky Ny Mpianatra
Shily 22 Avrily 2013
(Amin'ny teny espaniola avokoa ny rohy) Niverina tanaty hery tamin'ny alalan'ny fidinana teny an-dalambe nanerana ny firenena Shiliana ny hetsiky ny mpianatra mitaky ny fanabeazana maimaipoana sy tsara. Nifamotoana tany amin'ny foibe sosialin'ny tanàndehibe maro nanerana ny firenena ny mpianatra izay niahiakiaka hatrany ny hoe “Hianjera, hianjera, ny fanabeazan'i Pinochet… sy...
Nifidy ny Kandidà Mpanohitra Capriles Ny Ankamaroan'Ireo Venezoeliana Ao Panama
Panamà 21 Avrily 2013
Nanaraka akaiky ny fifidianana natao tao Venezoelà tamin'ny Alahady 14 Aprily 2013 lasa teo i Panama, izay ahitana mponina Venezoeliana marobe. Nahitana ny fihetseham-pon'ireo Venezoeliàna monina ao Panama ny tambajotra sosialy, tahaka izany ihany koa ireo Panameana te-hanaraka ny zava-nitranga tao Venezoela, mpifanolo-bodirindrina akaiky azy. Panamaniana daily Día a Día (@DiaaDiaPa) [es]...
Meksika: Feo Hafa Nampanginina [NOHAVAOZINA]
Meksika 21 Avrily 2013
Tamin'ny 7 avrily lasa teo, nisy mpiserasera amin'ny media sosialy fantatra fotsiny amin'ny hoe Valor Por Tamaulipas nanambara ny fikasany [es] hanakatona ny kaonty Facebook sy Twitter izay lasa nalaza ho loharanom-baovao momba ny herisetran'ny [trafika-na] rongony any avaratr'i Meksika.